Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 07/05/2019
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 07/05/2019
(နေပြည်တော်၊ ၇-၅-၂၀၁၉ ရက်)
Yangon May 6
Workshop on Review of the Implementation of the Recommendations on Rakhine State was held in Yangon yesterday as part of efforts for peace and stability and for speeding up socio economy in the state.
Speaking at the event, Union Minister Dr. Win Myat Aye said that the Union Government has now passedayear and half of implementing recommendations of the Annan commission. Durable peace and security is the first the most important factor for achieving anything in Rakhine. Therefore, our priority is to createaconductive environment for social acceptance and cohesion. He also stressed the importance of the rule of law in Rakhine State. And he invited domestic or international partners who intend to work with the Union Government to achieve peace and stability in accordance with the international best practices and norms as the country is continuously trying to promote the rule of law in Rakhine State.
He said one significant example is the improvement of infrastructure such as roads, telecommunications and electricity in Rakhine State over the past two years. The socio-economic development wasafundamental need to restore normalcy and improve the situation in Rakhine State, and it is alsoacritical step in buildingademocratic federal Union.
Furthermore, he said three IDP camps were closed right after the interim report was submitted. One more camp was closed in2018 and one is currently in the final stages of closure. In 2018, we draftedanational strategy for closures of IDP camps in close consultation with national and international experts. He also underscored the important process of National Verification.
Afterwards, Rt. Hon. Lord Darzi of Denham, member of the Advisory Board of the Committee for Implementation of the Recommendations on Rakhine State, deliveredakey-note speech urging the international communities to cooperate in implementing the recommendations as the Rakhine issue is the long standing issue and the challenges in Rakhine State needs to be resolved through negotiations.
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ အလျင်အမြန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၊ Park Royal Hotel ၌ မေလ ၆ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် ကိုဖီအာနန်ကော်မရှင်၏ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ တစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရေရှည်တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် လူမှုသဟဇာတဖြစ်ရေးသည် အရေးပါသောကြောင့် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ အစိုးရအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို မြှင့်တင်နိုင်ရေး စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အတူပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကို ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်း၊ သိသာထင်ရှားသည့် သာဓကတစ်ခုကို ပြရမည်ဆိုပါက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပြီးခဲ့သည့် (၂)နှစ်တာ ကာလအတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိရေး စသည့် အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်ကို ပြလိုပါကြောင်း၊ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အခြေအနေများ ပုံမှန်ပြန်လည်ဖြစ်စေရေးနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရေးအတွက် အခြေခံကျသည့် လိုအပ်ချက် ဖြစ်သကဲ့သို့ ငြိမ်းချမ်းပြီး သာယာဝပြောသည့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးအတွက် အရေးပါပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အကြံပေးကော်မရှင်၏ ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာတင်သွင်း ပြီးပြီးချင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း IDP စခန်း (၃) ခုကို ပိတ်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ နောက်ထပ် (၁) ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ပိတ်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခုနှစ်တွင် ပိတ်သိမ်းဆဲစခန်း(၁)ခုကို စနစ်တကျ ပိတ်သိမ်းနိုင်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း IDP စခန်းများပိတ်သိမ်းရေး အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ(မူကြမ်း)ကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ညှိနှိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်သည်လည်း အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် ဖြစ်ပါကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ အပေါ်အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ၏ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင် Rt. Hon. Lord Darzi of Denham က ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရင်ဆိုင်နေရသည့် အခက်အခဲများသည် အခုမှ ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲများမဟုတ်ဘဲ ကာလရှည်ကြာ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် သိမ်မွေ့စွာ ဖြေရှင်းရမည့်ကိစ္စ ဖြစ်ပြီး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများမှတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ခြင်းကြောင့် ရှေ့ဆက် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများတွင် ရလာဒ်ကောင်းများ ရရှိလာစေရေး နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်း အနေဖြင့် ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။